Fampiharana sy torohevitra raha misy fangalarana smartphone | Androidsis
Matahotra ny telefaoninao ve ianao? Torohevitra sy tetika manampy raha sanatria ny halatra
Google | | Fampiharana Android, About us, Android cheat, Tutorials
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny fialantsasatra fahavaratra ny mitombo ny isan'ny telefaona halatra. Mampalahelo fa mahazatra ny mpizahatany (nasionaly na vahiny) no voafitaky ny mpisoloky na mpanao heloka bevava amin'ny fomba maloto indrindra ary maka ny entany nefa tsy tsapan'izy ireo akory.
Raha manana dia kasainao hatao ianao, dia mamporisika anao aho hanohy hamaky ity lahatsoratra ity satria, satria ny fisorohana dia tsara kokoa noho ny fanasitranana, dia hanome anao toro-hevitra sy tetika maromaro izahay izay mety tena ilaina raha misy halatra. Na dia mety ho lainga aza izany, miaraka amin'ireo rindranasa izay hodinihintsika dia azo atao tokoa ny mamerina ny findainao finday avo lenta raha misy halatra na fatiantoka.
1 Inona no ataoko raha mangalatra izany?
1.1 Toerana sy fanaraha-maso lavitra
1.2 Encrypt data ho fepetra fisorohana
1.3 Fahazon'ny efijery
1.4 Fiarovana amin'ny ady amin'ny halatra Google
Inona no ataoko raha mangalatra izany?
Io no fanontaniana mahazatra apetratsika rehetra amin'ny tenantsika indraindray. Ny tena mahomby indrindra amin'ireto tranga ireto dia ny fampiharana apetraka amin'ny finday avo lenta izay mamela antsika tadiavo sy tantano ny terminal amin'ny fomba mahomby indrindra azo atao.
Toerana sy fanaraha-maso lavitra
Angamba iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra dia Android Device Manager. Tonga tamin'ny 2013 tao amin'ny Google Play ity fampiharana ity ary mamela anay mitadiava sy manidy ny telefaonintsika raha toa ka ilaintsika noho ny antony maro samihafa izany. Raha nangalarina ny terminal anay ary hitantsika fa tsy ho vitantsika ny hahatratra azy, Android Device Manager mamela antsika hamafa ny atiny rehetra koa izy io.
Hitady fitaovana aho
Ny hany zavatra tsy maintsy ataontsika aorian'ny fisintomana ilay rindranasa avy amin'ny Google Play dia ny fisafidianana kaonty Google izay nifandraisinay tamin'ilay fitaovana tianay ho hita amin'ny ho avy. Raha vantany vao niditra ny teny miafin'ny kaonty Google dia manolotra antsika ny fahafahana misafidy ireo fitaovana izay hametrahantsika ny terminal very.
Fifanarahana Android Devide Manager mitadiava fitaovana iray.
Raha tsy ianao no nisy nangalatra finday dia afaka manome tanana foana ianao. Android Device Manager dia ahitana ny mety hisian'ny midira ho vahiny fahalalana ny kaonty Google sy ny teny miafin'ny fitaovana ho hita. Amin'izany fomba izany, raha mbola manome anao ireo mari-pahaizana ireo ny namanao dia afaka manao izany ianao manampy anao hahita ny fitaovanao. Hamela antsika koa io mampihetsika fanairana mafy sy mahasosotra mandritra ny fotoana maharitra.
Android Devide Manager mamela ny fampandehanana fanairana.
Fampiharana iray hafa tena mahaliana izay manatanteraka saika asa mitovy amin'ilay taloha Lookout Mobile. Miaraka amin'ny metatra marinas, ity app ity dia mametaka ny fitaovanao amin'ny fitaovana rehetra ary milaza aminao ny azy toerana eo amin'ny sarintany Google Maps. Toy ny amin'ny Android Device Manager, afaka manao izany koa isika manetsika fanairana (mbola ao anaty finday mangina).
As nampidirina fiasa manasongadina ny safidy izay mitahiry toerana farany ny terminal anao, ny mety ny manaova backup ary a fiarovana amin'ny fidirana an-tsokosoko.
Antivirus + Security | Jereo
Encrypt data ho fepetra fisorohana
Ity safidy ity dia mahalana no jerena ary angamba iray amin'ireo fepetra fisorohana tsara indrindra azontsika raisina. Mora ny mahafantatra fa manana risika ihany koa izy io, satria tsy maintsy ampidirina pin manokana isaky ny mihodina ny terminal. Raha tsy tadidinao izany pin izany, ny vahaolana tokana dia ny famerenana amin'ny laoniny ny telefaona amin'ny toeran'ny orinasa. Ho fanampin'izany, tsy azo haverina ny fizotrany, ka raha tsy tianao hijanona ho voahita ny findainao dia tsy maintsy averinao amin'ny laoniny, eny na eny, izay midika fahaverezan'ny data tanteraka. Eto ambany aho dia manazava ny dingana tokony harahanao raha te-hanafina azy ianao:
Tsy maintsy atao ny manana a PIN na teny miafina hidin-trano. Raha tsy izany dia tsy hamela anao hanafina ny angon-drakitra. Raha tsy manana ianao dia ny làlana ankapobeny arahana dia Fikirana> Fandriampahalemana> Hidin-efijery> Karazana fiarovana> Mametraha PIN na teny miafina.
Raha vantany vao tafapetraka ny pin na ny teny miafinao dia araho fotsiny ity làlana manaraka ity: Fikirana> Security> Encrypt phone.
Tahaka ny ezahantsika hanana ny rindranasa tsara indrindra hahitana ny telefaonintsika, raha tsy manana isika tsara hidin-trano tsy misy ilana azy izany. Izay mahalala ny lohahevitra dia mety hihoatra ny fiarovana omen'ireo fampiharana ireo ary hampiato ny toerana lavitra.
Ny hetsika voalohany tokony hatao dia ny hidin-trano tsara.
Raha tsy mamela ny terminal azontsika aleha amin'ny olon-drehetra isika dia mametraka karazana fiarovana amin'ny famohana (lamina, pin na teny miafina), ny vintana ahafahan'izy ireo mamoaka izay tadiaviny avy amin'ny finday avo lenta dia mihena be. Ka na dia kamo aza ianao dia ataovy foana amin'ny findainao ity karazana fiarovana ity satria hamonjy aretin'andoha mihoatra ny iray amin'ny ho avy ianao.
Fiarovana amin'ny ady amin'ny halatra Google
Mampalahelo fa io safidy io dia tsy misy afa-tsy amin'ny Android 5.1 Lollipop. Fitaovana tena ilaina izy io ary tena mahaliana amin'ny fotoana iray: mifamatotra amin'ny antsika ilay fitaovana Kaonty Google ary na dia averin'ny orinasa aza izy io, tsy misy kaonty sy teny miafina voalaza, tsy azo ampiasaina ny fitaovana.
Raha manandrana manalavitra an'io fepetra io izy ireo amin'ny fidirana amin'ny kaonty Google azy ireo, hangataka fanamarinana sasany ilay fitaovana hisorohana ny mpangalatra tsy hiditra amin'ny kaonty Google anao. Raha manandrana mamafa ny kaontinay Google ny mpangalatra dia mila ny taratasy fanamarinana koa izy ireo.
Mandehana amin'ny tranga ratsy indrindra, andao alao sary an-tsaina hoe mahazo ny kaonty Google sy ny teny miafiny ilay mpangalatra. Mazava ho azy fa hovaintsika izy io ary hihetsika ny rafitra a Timer maharitra 72 ora izay tsy ho azo atao ny mampiasa kaonty voalaza hamaha ny terminal Android.
Fitaovana avy amin'ny orinasa miaraka amin'i Android 5.1, be mifandray amin'ny kaonty Google ary manana pmamoha atron eo amin'ny efijery voalohany, izy ireo ihany no manana an'io fiarovana io. Tsy mila manao na inona na inona ianao, raha tianao izany zahao raha manana azy io ianaoNy sisa ataonao dia mametraka lamina hamaha tsy azo antoka. Amin'izany fomba izany dia tokony hahazo hafatra milaza ianao fa hijanona tsy hiasa intsony ny fiarovana ny terminal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Matahotra ny telefaoninao ve ianao? Torohevitra sy tetika manampy raha sanatria ny halatra
Ahoana ny fomba fanakanana ny fampandrenesana be loatra avy amin'ny fampiharana amin'ny Lollipop amin'ny alàlan'ny gazety lava